आज शुक्रबार, कुन राशिका लागि शुभ कुनका लागि अशुभ ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल - Naya Pusta
आज शुक्रबार, कुन राशिका लागि शुभ कुनका लागि अशुभ ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ असार २७, शुक्रबार ०६:३५
मिति २०७६ साल असार २७ गते शुक्रबार, इस २०१९ जुलाई १२। शकसंवत् १९४१, परिधावी संवत्सर, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु। नेसं ११३९ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष। हरिशयनी एकादशी २६ः१७ उप्रान्त द्वादशी। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५ः१७ बजे, सूर्यास्त– १९ः०० बजे र दिनमान ३४ घडी ८ पला।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाल टी-२० वरीयतामा एक स्थान माथि उक्लियो
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) सामाजिक कामहरु समयमानै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । राजनीति कर्मिले सर्बसाधारणको काम गरि पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पढाइ लेखाइमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने समय रहेकोले मन प्रशन्न हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने दाम्पत्य जीवन खुसी रहनेछ । बिहानको समयमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस् : बिहीबार, निकै राम्रो छ यी ८ राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) विदेशबाट सञ्चालित सस्थामा काम पाउँने तथा पदोन्नतिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ। लामो दुरिको बिदेश यात्रा हुनेछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुले मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिने समय रहेकोछ। स्वास्थ्य सबल हुनेहुँदा परिणाम मुखि काम गरि समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) कामको सवालमा विशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने नया व्यावसायमा लगानी गरि आर्थिक रुपमा सुदृड हुन सकिनेछ । नया काम पाउने तथा नोकरिमा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिको समयोगमा राम्रा काम गर्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानी हुनेछ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) यात्रा तथा मनोरञ्जनमा समय खर्च हुनेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । सानो सानो लगानी गर्दा पनि व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । प्रेमको ठोरो कसिनुको साथै घर परिवार तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने छ । सरकारी क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता रहने योग रहेकोछ। बिहानको समय मध्ययम रहेकोले हार्डवयर सँग सम्मन्धित काम गर्दा ध्यान दिनुहोला।
कतै घरको भित्तेघडी त बनेको छैन तपाईको घरको अशान्ति तथा गरीबीको कारण ?
ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउने बिषयमा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ